Tabaha xiirashada ugu fiican (II) | Ragga Stylish
Maqaalka hore ee ku saabsan sida loo helo xiirista ugu fiican Waxaan ka hadlaynaa marxaladda hore ee xiirashada, waxa aan ugu yeerno xiirashada ka hor.
Maqaalkan waxaan ku wajihi doonnaa marxaladda xiirashada lafteeda, iyo si gaar ahba, alaabooyinka ay tahay inaan u isticmaalno xiirashada.
Haddii aad la yaaban tahay haddii aad isticmaasho daab ama mandiil, jawaabtu waa fududahay: way kuxirantahay.
ka faa'iidooyinka of the garbaha waa inaad aad u xiirto badan dheeraad ah oo lagu degdegay. Ka sokow, isaga fududeynta isticmaalka, ka deg deg ah kaas oo aad ku xiirto, iyo meel yar in ay ku mashquulsan yihiin bacda musqusha, waa dhibco wanaagsan marka la qiimeynayo gadashada daab. Haa runtii, la tuuro lahaynYeynaan iska dulmin daryeelka shakhsi ahaaneed. Si kastaba ha noqotee, garbaha ayaa sidoo kale leh dib udhacyada: waxay sababaan jeexitaan, timo soobaxaya midkiiba laba saddex, cuncunka maqaarka inbadan ka badan mandiil (sidoo kale maxaa yeelay waxay ku degdegayaan wax badan) kharashka muddada-dheerna wuu ka sareeyaa (beddelka daabku maalmahan ma sii jiro wax ka badan 3 isticmaal).
ka mandiilloSi kastaba ha noqotee, iyagu ma gaaraan dhammaystir noocan oo kale ah waxayna qabsadaan wax badan laakiin waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda: isticmaal meel kasta meesha aan ku leenahay ma xanaajinayaan maqaar aad u badan, ma sababaan goyn Iyo keydka daab muddada-dheer waa u qalantaa. Dabcan, deg-deggu wuxuu ka tagayaa waxyaabo badan oo la doonayo marka la barbar dhigo daab, taasi waa sababta mandiilku u noqon doono in la isticmaalo marar badan daabka si gadhkeennu ula qabsado oo aan u dhammaystirno si dhammaystiran.
In blades, waxaan kugula talinayaa Gillette Mach 3, Kuwii ugu dambeeyay ee ay sii deysay Gillette waa dhib badan laakiin waa ku kacsan yihiin maqaarka.
Xiirayaasha, waxaan hayaa Taxanaha Braun Pulsonic 9 oo waa raaxo, waxay leedahay deg deg qumman mana xanaajineyso maqaarkayga haba yaraatee, waliba maxaa yeelay waan sii wadaa tallaabooyinka horay loo xiirto hadal ahaan.
Waxaan rajeynayaa inay kaa caawin doonto markaad dooranaysid waxa ugu fiican ee xiirashadaada, in kastoo sida ugu fiican, had iyo jeer, ay tahay isku day.
Markaad Fasalka Leedahay: Tilmaamaha xiirashada (I)
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Talooyin ku saabsan xiirashada qumman (II)
Aniga aragtidayda, waa inaan sidoo kale, uguyaraan, xusno mandiilyada dhaqanka iyo garbaha, waxay aad uga waxtar badan yihiin mandiillada, ha ahaato mid gacanta ama koronto, way ka xanaaqaan wax yar maadaama ay leedahay hal daab oo keliya, iyo haddii aad wax yar dexjeegeysid wax ka qabashadooda waad yarayn doontaa, marka lagu daro soo celinta kalsoonidii shalay, ah iyo mustaqbalka fog waxay soo baxaan wax aad uga raqiisan mandiil (buug ama koronto)
Faa'iidooyinka pearku u leeyahay qofka